Fahad Yasain Taliyihii Hore Ee NISA Oo Lagu Xidhay Madaarka Djibouti - #1Araweelo News Network
Fahad Yasain Taliyihii Hore Ee NISA Oo Lagu Xidhay Madaarka Djibouti
#Villa #Somalia Oo Ka #Hadashay Xadhiga #Fahad Yasin
#Djibouti(ANN)-Fahad Yasin oo ahaa Agaasimihii Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ee #NISA, ayaa lagu xidhay Dalka Djibouti, sidaana waxa warbaahinta u xaqiijiyay Cabdikariim Maxamed Haashi.filayo inuu maalinta beri ka qabsoomo Magaaladda Muqdsiho.
Fahad Yasin oo dhowaan laga qaaday xilka Agaasimihii NISA, isla markaana loo bedelay La Taliyaha Amniga ee Madaxweynaha, waxa lagu xidhay Madaarka dalka Djibouti, isagoo kasoo kicitimay dalka Turkiga.
Afhayeenka Madaxweynaha Somalia, Cabdikariim Maxamed Haashi, ayaa sheegay in Fahad Yasin kusoo jeeday Magaaladda Muqdisho si uu shirka amniga qaranka ee lagu wado inuu maalinta beri ka qabsoomo magaaladda Muqdisho.
Xaashi wuxuu sheegay in ay xukuumadda dalka Djibouti ka wada hadleen xadhiga iyo xayiraada Fahad Yaasin, isla markaana uu rajaynayo in loo soo celiyo xorriyadiisa si uu safarkiisa usii wato, balse ma xaqiijin sababta loo xidhay.
Afhayeenku wuxuu meesha ka saaray in Booliska Caalamiga ah ee InterPol lala xidhiidhinkaro xadhiga Fahad Yasin oo dhowaan markii lawaayay Ikran Tahliil oo ahayd sarkaalad ka tirsanayd sirdoonka Somalia la waayay geeri iyo nolol, iyadoo arrintaasi sababtay inuu xilkii uu ka hayay Hay’adda NISA ku waayo, isla markaana xiisadda ka dhalatay arrintaa sabbatay khilaaf si wey n u hadheeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal wasaare Rooble oo awoodda isku haysta.
“Shirka maalinta Beri ee amniga qaranka ayuu ka qaybgalayay Fahad Yasin, wuxuuna ka jeedin lahaa warbixin aad loo dananaynayo, mana aha waxa loo xayiray kiiska arrinta gabadhaa ee waa khalad sababtoo ah waxa jira sharci caalami ah oo dhanka safarada iyo diblamaasiyada ah, Dawladda Djibouti ee aan walaalaha nahay waxan filayaa in ay arrintaa dhamaynay.” ayuu yidhi, Afhayeenka Madaxweynaha dawladda Federaalka ee Somalia.
Dhinaca kale, xukuumadda Dalka Djibouti, ayaan wax war ah kasoo saarin xadhiga Fahad Yasin, iyadoo xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya canbaaraysay xadhiga Sarkaalkaa oo ay ku eedaysay dawladda Djibouti.